100W N'èzí na-agba ọsọ ụgbọala ụgbọala ụgbọala ụgbọala China Manufacturer
Nkọwa:Mee ka akpụkpọ ụkwụ Shoebox Street,Ebe nchekwa ụgbọala Garage,Ọwa n'èzí
Home > Ngwaahịa > Ejiri Lightbox Shoebox > Ejiri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ > 100W N&#39;èzí na-agba ọsọ ụgbọala ụgbọala ụgbọala ụgbọala
Ruo 65% Echekwala Ike: Bbier Led Shoebox Street Light na- eji Ogo Ogologo oriọna oriọna. Enwu ọkụ ọkụ buru ibu ọtụtụ ugboro na-enwu gbaa karịa ìhè ọdịnala, Anyị 100W ụgbọala Garage Ịgba ọkụ nwere ike dochie 300 watt HPS / HID ngwa ngwa.
Ultra arụmọrụ: Nke a 100W N'èzí Street oriọna na- enye 13000 Lumens @ 5000K Lightlight White, Nke ahụ bụ egwu LED arụmọrụ nke 130lm / w! na 5000K Igwe uhie na-eme ka ìhè na ìhè doro anya na nyocha nke ndụ nke 50,000+ awa.
Wide Ngwa: Super na-egbuke egbuke L ed n'èzí osisi Ìhè maka adọba ụgbọala, n'okporo ámá, basketball ikpe, ama egwuregwu, n'azụ ụlọ na ndị ọzọ n'èzí ọkụ.
Ogo nchịkwa & IP65 Waterproof: ETL & DLC CE ROHS certification, anyị L ed Mpaghara Light Fixtures zuru oke maka ebe ọ bụla Damp ma ọ bụ Wet Ebe.
Akwụkwọ ikike afọ 5: Ọnụ ọgụgụ ndụ nke awa 50,000 na akwụkwọ ikike afọ 5 maka Bbier P na- agba Lot Lamps .
Mee ka akpụkpọ ụkwụ Shoebox Street Ebe nchekwa ụgbọala Garage Ọwa n'èzí